Danyuusbaro. | Voice Of Somalia
Tag Archives: Danyuusbaro.
DHAGEYSO:Tarsan “Ammaanka Muqdisho Faraha Ayuu Kasii Baxayaa Waddooyinka oo dhagxaan lagu gooyo waxba sooma kordhinayaan”.
Posted on March 3, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Maxamuud Nuur Tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ugu magacaawnaa DF-ka ayaa ka hadlay ammaan darrada ka taagan magaalada Muqdisho.
Tarsan oo mid kamida warbaahinta Muqdisho lahadlay ayaa sheegay in ammaanka caasimadda uu noqday mid faraha ka baxay islamarkaana maamulka hadda jira uu ku fashilmay sugidda ammaanka.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in dhagxaanta lagu gooyay waddooyinka gobolka Banaadir ay muujinayaan in ammaan laysku hallayn karo uusan jirin.
“ammaanku faraha ayuu kasii baxayaa magaalada Muqdisho,biraha iyo dhagxaanta lagu gooyay waddooyinka amni laguma sugi karo waxaana wada dad dana gaar ah leh”ayuu yiri Tarsan.
Maxamuud Nuur ayaa ka dayriyay in Muqdisho amnigeeda ay hantaan kumanaanka askari ee shisheeyaha AMISOM iyo kuwa DF-ka isagoona ka shanqariyay in qeybo badan oo shacabka Muqdisho katirsan aysan la shaqeyn dowladda Federaalka.
HOOS KA DHAGYSO
DHAGEYSO:-Cabdullaahi Axmed “Xeebta LIIDO ‘MUQDISHO’ Khamri ayaa lagu cabbaa”
Magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanaya fisqiga ay la yimaadaan qurba joog kusoo dhaqan badalmay Dalka Dibadiisa.
Maamulka Cabdalcasiis ee Dowladda Federaalka ayaa ka hadlay anshaxa xumada ka jirta Xeebta Liido ee Cabdalcasiis.
Taliyaha Ciidanka Booliska Cabdalcasiis Axmed Cabdullaahi ayaa sheegay in xeebta liido khamri lagu cabo islamarkaana dhaqan xumo ay ka jirto.
Wuxuu sheegay inaysan ogolaan doonin ficilada ka dhacaya xeebta liido oo ay tilaabo ka qaadi doonaan dadka.
DHAGEYSO:-Aqoonyahan Sharaxay Argagaxa Dowladda Ku Haysta Muqdisho.
Posted on November 14, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda howlgallo qorshaysan oo shabaabul Mujaahidiin ay ku beegsanayaan Saraakiisha Dowladda.
Maxamed Xasan oo ah AqooNyahan ku sugan Muqdisho ayaa sheegay Howlgallo dhacay Labadii Cisho ay sababeen kala shaki iyo Argagax soo wajahay madaxda dowladda.
Wuxuu sheegay howlgalada shabaabul Mujaahidiin ka wadaan Gobalka Banaadir ay sabab unoqotay in xitaa Magaalada ay isku rasaaseeyaan askarta Dowladda.
Wuxuu faafaahiyay fashilka amni ee Muqdisho iyo sirdoonka shabaabul mujaahidiin sida ay ugu xoogeesteen Muqdisho.
Dhagayso Wareysiga Aqooyahan Maxamed Xasan
WARBIXIN:-AMISOM oo Walaac Muujisay Kadib Qabsashadii Baraawe “Al Shabaab Xeelada Cusub ayay Bilowday”
Gen. Dick Olum oo ah taliyaha guud ee ciidamada Uganda ee Soomaaliya ka howlgala ayaa faah faahin ka bixiyay qaabka ciidanka AMISOM uqabsadeen magaalada Baraawe iyo caqabadaha ku hor gudban soo duulayaasha Afrikaanta ah.
Isagoo waraysi siinayay Idaacadda Codka Mareykanka VOA wuxuu carrabka ku adkeeyay in meel 6 KM ujirta magaalada Baraawe uu ciidankooda ku qabsaday dagaal culus oo dhanka Shabaabul Mujaahidiin uga yimid.
“Al Shabaab meel kaabiga ku heysa Baraawe ayay difaac ka galeen oo ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda kula dagaalameen waxaan qirayaa in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah uu dhankeena kasoo gaaray”ayuu yiri Gen. Dick Olum.
Mar waxa laga weydiiyay waxa ay ka filan karaan Al Shabaab ayuu muujiyay walaac hor leh oo ku aaddan in Shabaabul Mujaahidiin lasoo baxaan taaktiig cusub “Al Shabaab waxay kusii socotaa meel aan lagasoo waaqsan Karin sababtoo ah meel walba way kasii baxayaan inta ciidanka AMISOM gaarin balse sidaasi kuma dhammaan oo waxay soo qaadi doonaan weeraro iyo dilal taaktiik cusub ayayna qorshaynayaan”ayuu hadalkiisa sii raaciyay taliyaha ciidanka Uganda.
Dick Olum ayaa ku faanay in ciidamada calooshood u shaqeystayaasha Afrikaanta jinsiyadaha kala duwan leh ay dhul ballaaran ka qabsadeen xarakada Shabaabul Mujaahidiin balse ay qorshaynayaan in ay isaga baxaan soomaaliya marka lagaaro sanadda 2016-ka.
Xarakada Al Shabaab ayaan wali wax war ah kasoo saarin qabsashada cadawga ee magaalada Baraawe waxaana xusid mudan in xarakadu ay wax ka bedeshay qaab dagaaleedkeeda oo aysan magalooyinka ka difaacin cadawga balse ay shisheeyaha ku hareerayso magaalooyinka ay qabsadeen.
in kabadan 6 dowladood kirishtan Afrikaan ah ayaa duullaan gardarra ah kusoo qaaday soomaaliya iyagoo taageero caalami ah ka helaya reer galbeedka iyo qaar katirsan wadamada carabta dawaaqiidda ah.
In Gabdhaha iyo Wiilasha ay kala Qol ahaadaan, ma dhaqan Argagixisaa, mise waa dhaqan Islaam?!!!
Posted on July 16, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Waayadaan dambe waxaa aad usii laba lixaadsaday mashruuca ay reer galbeedku u yaqaaniin la dagaalanka argagixisada oo dhaqaalo farabadan lagu bixiyo sidii looga hirgelin lahaa dalalka soo koraaya gaar ahaan dalalka islaamka intooda jilicsan.
Mashruucaan oo aan lasoo koobi karin dhaqaalaha iyo waqtiga lagu bixiyo ayaa sixowli ah uga socda dalkeena Soomaaliya oo waayadaanba kamid ahaa meelaha ugu dabacsan adduunyada ee cidwaliba haweysato inay danaheeda ka fushato. sikastaba ha,ahaatee dhowr siyaabood ayuu u taabtay qorshahaani dhaqanka iyo diinta shacabka Muslimiinta ah ee Soomaaliyeed oo hadda la moodo in laysu qaraareeyey maadaama dadka badankiisu aysanba isku mashquulin sidii ay uga hortegi lahaayeen dhagaraha loosoo maleegayo qarankeenna.
Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa dhowr waxyaalood oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga hirgeliyey dalkeenna kuwaasoo ay qaarkood horeba ujireen qaarna hdda lagu daray oo ay nagu cusub yihiin.
Arimahaan aan sheegayo ayaa hadda loogu yeeraa ladagaalanka dhaqanka argagixisada ayadoo aan filaayo inaadan inta badan afkooda ka maqlin kuwa kuwa mashquulsan hirgelinta mashruuca balse aad ka dareemi kartid meelaha ay ka taliyaan sida ay uga dhaqan geliyaan iyo cidda ku biisho ee dhaqaalaha kusiisaba.
Waxaa ugu horeeya ee hadda ay dhammaan maamulada dalka kajira ee federaalka ahi isla qaateen fikirkii ahaa ISDHEXGALKA DHALINYARADA oo ah mashruuc lagu baabi,inayo dabeecadihii ama amaradii ay maxaakiimta Islaamku kahirgeliyeen qeybo badan oo dalkeena ah markii dambana ay shabaabku sii wadeen illaa maanta.
Mahruucaan waxaa wada oo dhiirigelinaayo dad aqoonyahanno ah oo qaarkood ay degan yihiin dalka Mareykanka ,kuwaas oo hadda kawada maamulka Puntland ayadoo Xamarna ay uga horeysayba oo loo furay Idaacado laga baahiyo iyo dad soo xero geliya dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha ah ee la doonaayo inay isdhex fariistaaan oo ay Muusik wada cayaaraan, halka qaarkoodna labaro wixii awel lala xishoon jiray ee SHUKAANSIGA ahaa.
Sidoo kale waxaa Masaajidda inta badan laga mamnuucay in gaalada dhibka ku haysa Muslimiinta laga habaaro ayadoo xaafadaha ama magaalooyinka qaarna uusan qudbada jimcaha dujin karin shiikh aan warqad aqoonsi kawadan maamulka degmada ama xaafadda.
Waxaa la dumiyey Duqsiyo Quraan oo aan tiradooda halkaan kusoo koobi karin halka qaarkood laga barakiciyey meelihii ay ku yaaleen dabadeedna laga furay iskuullo Musikada lagu barto iyo heesaha Turkiga.
Haddaba aan isweydiinee madhaqan argagixiso ayaa lala dirirayaa mise diinteenna iyo dhaqankeenna??
Qore Rajo & Ogaal.